Xildhibaan C/qaadir Carabow oo Mashaariic ka fuliyay degmada Balcad – Kalfadhi
May 8, 2019 Kalfadhi
Cabduqaadir Carabow Ibraahim oo katirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii dambe ku sugan degmada Balcad ee Gobalka Shabeelada Dhexe ayaa halkaasi ka bilaabay dhismaha Mushaariic muhiim u ah degaanka.
Cabduqaadir Carabow ayaa la kulmay dadka degaanka waxa uuna kala hadlay baahiyaha ay qabaan isagoo kadib halkaasi ka bilaabay dhismaha Mushaariic isugu jira Dayactirka Kanaalka Faarax Golaleey, Mashaariic kale oo ah biyo gelin iyo Gaadiid booyad ah oo deegaanka biyo u dhaamiya.
Carabow ayaa sheegay in dhowaan la isticmaali doono Kanaalka Faarax Golaleey oo ay ku socoto Dayactir heer gaba-gabo ah iyo Mashaariic kale oo Biyo gelin ah. Kanaalka Faarax Golaleey ayaa la sheegay in uu biyo siiyo ama Waraabiyo Kumanaan hegtar oo beera ah kuwaas oo ku yaala tuulooyin badan.
“Waxaan idin ballan qaadayaa in aan kawar qabo xaaladda degmada iyo Nolashiina, Mshaariicdaan waxay muhiim u yihiin degaanka waxaana rabnaa in ay nolasha wax ka badalaan” ayuu yiri Xildhibaan Cabduqaadir Carabow oo katirsan Golaha Shacabka.
Dhinaca kale Xildhibaan Cabduqaadir Carabow Ibraahim ayaa booqday Saldhigyo ay dagan yihiin Ciidamada Miateriga Soomaaliya isagoo u geeyay deeq Xoolo ah oo ay Ciidamadaan ku Afuraan.
Degaanada uu booqday Xildhibaan oo ay dagan yihiin Ciidamada Soomaaliya ayaa ku yaala duleedka degmada Balcad ee Gobalka Shabeelada Dhexe waxa uuna ku wareejiyay labo neef oo Geel ah iyo daawo ay Ciidamada isticmaalaan.
“Waxaan qirayaa inaa tihiin mujaahidiin maadaama aad go’aansateen in Soonkaan aad ka soo dhaxbaxdaan qoysaaskiina halkaan cidalada ahna aad ku noolaataan” ayuu yiri Xildhibaan Cabduqaadir Carabow oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.